Duulimaadyada Madaniga ah ee Hindiya Waxay Samaynaysaa Isbedelka Habboon ee Maamulka elektaroonigga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Duulimaadyada Madaniga ah ee Hindiya Waxay Samaynaysaa Isbedelka Habboon ee Maamulka elektaroonigga ah
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada madaniga ah ee Hindiya ayaa bilaabay e-platform
Wasiirka Duulista Rayidka ee Hindiya Shri Jyotiraditya Scindia ayaa maanta bilaabay eGCA - nidaamka e-Maamulka ee Agaasinka Guud ee Duulista Rayidka (DGCA).
Mashruucu waxa loogu talagalay in lagu habeeyo hababka iyo hawlaha DGCA.
Wasiirka Duulista Hawadda ayaa sheegay in mashruucani uu ka dhigan yahay isbedel ku yimi xeerarkii xannibaadda oo loo beddelay wada shaqayn wax ku ool ah.
Adeegyada la siiyo daneeyayaasha kala duwan ee DGCA sida duuliyayaasha, dayactirka diyaaradaha, iwm. ayaa laga heli doonaa onlayn eGCA-ga.
Maalinta ay Hindiya u dabbaaldegayso "Azadi Ka Amrit Mahotsav" si loo xuso 75 sano ee madax-bannaanida, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Wasiirka Midowga Duulista Rayidka, ayaa maanta u heellan eGCA, oo ah nidaamka maamulka e-maamulka ee Agaasinka Guud ee Duulista Hawada (DGCA) Umadda. Munaasabadan, waxaa goob joog ka ahaa Xoghayaha Duulista Hawada Shri Rajiv Bansal, Agaasimaha Guud ee Duulista Hawada Shri Arun Kumar, iyo xubno caan ah oo ka tirsan warshadaha duulista rayidka.
Isagoo ka hadlayay munaasabadda, Shri Scindia ayaa sheegtay in qaadashada aragtida Ra'iisul Wasaaraha Dijital ah ee India, DGCA ay hirgelisay nidaamka e-maamulka eGCA. Mashruucu waxa uu ujeedadiisu ahayd in lagu habeeyo hababka iyo hawlaha DGCA, iyada oo 99 adeeg oo daboolaya 70% shaqada DGCA lagu fuliyay wajiyadii hore, iyo 198 adeeg oo lagu dabooli doono wejiyada kale. Waxa uu sheegay in madal hal daaqad ah ay keeni doonto isbedel weyn - baabi'inta wax-qabad la'aanta shaqada, yaraynta isdhexgalka shakhsi ahaaneed, hagaajinta warbixinta sharciyeed, kor u qaadida daahfurnaanta iyo kordhinta wax soo saarka.
Waxa uu ku ammaanay DGCA sida ay u keentay isbedel muuqda oo laga beddelay xeerar xaddidan oo loo beddelay iskaashi wax dhisaya. Wasiirku waxa uu sheegay in hadda aanu bilownay, safarkiina aanu wali dhamaan, dhawaana dib u eegis lagu samayn doono si loo fahmo sida macmiishu uga faa’iidaysteen is bedelkan, iyo waxa kale ee u baahan in la qabto. Shri Scindia wuxuu yidhi kayagu waa dawlad jawaab celin ah, taas oo, oo uu hogaaminayo Shri Narendra Modi, u beddeshay dhibka wakhtiga masiibada fursad.
Mashruucu waxa uu saldhig adag u noqon doonaa kaabayaasha IT-ga iyo qaabka adeeg bixinta. E-platform wuxuu bixiyaa xal dhamaadka-ilaa-dhamaadka ah oo ay ku jiraan codsiyada software kala duwan, isku xirnaanta dhammaan xafiisyada gobolka, "portal" ee faafinta macluumaadka iyo bixinta adeegga internetka oo degdeg ah jawi ammaan ah. Mashruucu waxa uu kor u qaadi doonaa hufnaanta adeegyada kala duwan ee ay bixiso DGCA waxa uuna xaqiijin doonaa hufnaanta iyo isla xisaabtanka dhammaan howlaha DGCA. Mashruuca waxaa lagu fuliyay TCS oo ah Bixiye Adeeg iyo PWC oo ah Lataliye Maareynta Mashruuca.
Intii lagu guda jiray furitaanka, Wasiirka Duulista Hawada ayaa sidoo kale daaha ka qaaday daraasad kiis, "DGCA waxay ku qaadaa duulimaad dijitaal ah," kaas oo soo jiidanaya safarka DGCA iyada oo loo marayo hirgelinta eGCA. Caqabadaha ay DGCA wajahday iyo tillaabooyinka la qaaday si wax looga qabto kuwaas iyada oo loo marayo madal eGCA ayaa lagu daray daraasaddan.
Adeegyada la siiyo daneeyayaasha kala duwan ee DGCA sida duuliyayaasha, Injineerada Dayactirka Diyaaradaha, Xakamaynta Taraafikada Hawada, Hawl-wadeenada Hawada, Hawl-wadeenada Madaarka, Hay’adaha Tababarka Duulimaadyada, Hay’adaha Dayactirka iyo Naqshadaynta iwm ayaa hadda laga heli karaa eGCA online-ka ah. Codsadayaashu hadda waxay awoodi karaan inay codsadaan adeegyo kala duwan oo ay ku dhejiyaan dukumeentiyadooda onlayn. Codsiyada waxaa ka baaraandegi doona Saraakiisha DGCA, oggolaanshaha iyo shatiyada waxaa lagu bixin doonaa onlayn. App-ka moobilka ayaa sidoo kale loo furay Duuliyayaasha iyo Injineerada Dayactirka Diyaaradaha si ay u eegaan muuqaaladooda oo ay u cusboonaysiiyaan xogtooda marka ay socdaan.
Hindisaha eGCA waa horumar laga gaaray socdaalka isbeddelka dhijitaalka ah ee DGCA wuxuuna kobcin doonaa khibradda daneeyayaasha. DGCA, waa tallaabo loo qaaday jihada "fududaynta ganacsiga.” Isbeddelkan dhijitaalka ah ayaa wax weyn ku kordhin doona qaab-dhismeedka sharciyeedka badbaadada ee DGCA.